Isikhathi esining impela, ngemuva kokuthenga imoto Lada Kalina, abanikazi baqiniseka zonke yesondlo amaphuzu kusukela umthengisi ogunyaziwe izikhungo ezikhethekile. Ngisho ezifana ukulungiswa elula njengoba okudlekayo esikhundleni, abanikazi abaningi izimbangela nimesabe, bancamela ukuphathisa wonke amakhosi.
Kodwa eqinisweni, i ukulungisa ezimele kanye nokugcinwa kungekho inkinga enkulu, yebo, ngamathuluzi ezidingekayo, futhi umsebenzi othile wenziwa nhlobo ngaphandle kwalo. Isibonelo esimangalisayo lokhu kungaba esikhundleni lemifanekiso fuel ukuze Kalina. Lapha sidinga kuphela izandla futhi akanaso isikhathi ukwenza le nqubo ngaphandle kosizo, futhi nakakhulu - ochwepheshe engamakhulu. Uma ungathanda ukufunda umhlahlandlela enemininingwane ngezithombe ke bheka kabanzi lapha: Ukufakwa lemifanekiso uphethiloli at Kalina. A umyalelo ngezansi uzonikezwa, okuyinto, futhi, ungakwazi ukuqonda kalula futhi ukwenza yonke into ngokwakho.
Inqubo lapho esikhundleni lemifanekiso ngophethiloli imoto Lada Kalina
Into yokuqala udinga ishayelwa ku umgodi noma trestle. Noma, ngo ingcosana - nje ukukhulisa ezingemuva Jack imoto.
Ngemva kwalokho, kuyodingeka ukuze kuncishiswe ukuminyana kuleli ohlelweni nophethiloli. Le nqubo wenziwa ngendlela elandelayo: okokuqala, eduze isigwedlo gearshift ukuvula lid, okuyinto anamatheliswe isithombe "Amandla". Ngemva kwalokho, kumelwe fuse isuswe, okuyinto unesibopho ukusebenza kwe-futha nophethiloli. Itholakala inhliziyo - blue.
Khona-ke, ohlangothini lwesokunene ngaphambili langemuva isondo endaweni kukaphethiloli ukuhlunga uqobo ukuthola okuyinto ifana isitsha esincane metal bunjwa cylindrical.
Njengoba sekushiwo ngenhla, iyiphi ithuluzi akudingekile, kusukela lemifanekiso fuel is abethela by ezivamile snap nokufakwa ku hose, futhi nge ngocingo plastic, elibamba ilungu izindlu.
Okokuqala, nqamula bazabela nokufakwa nge amapayipi amanzi. Basuke ziboshelwe metal izibopho ezidinga push bese udonsa ithiphu maqondana nokususwa.
Lapho hoses Unqanyuliwe, ungakwazi uqhubekele ekuthatheni lemifanekiso aphume umnikazi. Yikuphi kwanele nje kancane ukudonsa element umzimba, futhi kuba ejects kalula.
Ukubuyiselwa lemifanekiso fuel wenziwa ukuze reverse ukususwa. Sicela uqaphele ukuthi le ngxenye has umcibisholo ne pointer ukuba ugqugquzela isiqondiso ukunyakaza emgwaqeni omkhulu. Kufanele ngempela iqondiswe ngesikhathi fuel ukunyakaza yezimoto ugesi uhlelo.
Emva entsha isihlungi isici is aboshelwe umnikazi, ingubo nokufakwa emuva kuze kube yilapho obandakanya nge amapayipi amanzi ukuthi zonke iziza obukhulu.
Okulandelayo, iya emuva Lada Kalina saloon kanye uyibuyisela indawo fuse yayo yasekuqaleni.
Kuyaphawuleka ukuthi lapho ukuthungela ngemva kwalokhu nqubo Akubalulekile ngokushesha ukuqala injini. Kungcono ukuvula ukuvala ukuthungela izikhathi eziningana, sokuqhuba futha fuel kanye nophethiloli akhishwa kuya injector.
Siqala imoto futhi unike injini ukusebenzisa imizuzu embalwa ukuhlola ukusebenza kwe- uhlelo uphethiloli supply enhlanganweni mpintsha.
Uma ukuhambisana nayo yonke izincomo ukuthi banikwa ama lo mhlahlandlela, lokhu hlobo lwenkonzo kungenziwa ngamaminithi angu-30 futhi nhlobo, singabali izindleko lemifanekiso luzodla akukho ruble abangaphezu kuka-200 ezingxenyeni auto esitolo.
Ferrari 348: izici lobuchwepheshe kanye nencazelo edume Italian ezemidlalo imoto
Imoto "Tesla" eRussia, intengo, ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Silungisa "Chevrolet Aveo T300" - izici ezintsha kamakhi
Incazelo kanye Ukucaciswa "Nissan Almera" 2013
Kungani "bamatasa kakhulu" - lokhu amanga enkulu?
Kungani uju crystallization?
Kanjani ukuze umfana othandweni nawe? Ngazi kanjani ukuthi le nsizwa wamthanda?
Indlela ukupheka iprotheni ekhaya? Ziyini izinzuzo zokuba nalo?
Liquid magnesium Hand: incazelo, izici isicelo kanye nokubuyekeza
Zingaki amehlo anesicabucabu anaso, futhi yiziphi izinhlobo zezinkanyezi ezikhona?
Okthoba 22 "White Crane" iholide. Umlando kanye nezici holidi
Umangele ukuthi ungasetha kanjani i-microphone kukhompyutha yakho - ukuphendula lapha.